Nyanzvi Yekutengesa: West Baden | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 21, 2009 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Murume wangu, anoshamisa uye ane tarenda rekugadzira director Steve Nealy (asinganyadzise plug), uye ini ndakapedza mazuva mashoma svondo rino ku nhoroondo West Baden Springs Hotel kumaodzanyemba kweIndiana. Rega nditaure ndisati ndapinda munyama yeizvi kuti kana uchigara mukati mekutyaira (kana kunyangwe kupfuura) kweiyi hotera uye nevamwe vese French Lick Springs Resort uye usati wazviona (kana kunyangwe uine), unofanirwa kushanya. Zvakanaka.
Semushambadziri uye brand strategist, ndakanyanya kufadzwa neiyo kutarisa kune yavo brand. Mahotera ese ari maviri ane nhoroondo dzakanyorwa dzinosanganisira kushanyirwa nevanoremekedzwa vemitsara yese, kusanganisira maPurezidhendi eUnited States, vakauya kunhandare inoyevedza kutanga kwema1900. Nguva pfupi yadzorerwa kubwinya kwavo kwekutanga, ivo haana kuregedza hudzamu mukusimbisa enhoroondo yezvinhu zvechigadzirwa panguva yekupa kune izvo zvinodiwa nevashanyi vemazuva ano. Semuenzaniso, iyo isina waya yekuendesa muWest Baden Springs Hotel yaive isina banga. Ini ndaisafanirwa kupa pendi yeropa kana kupa $ 10 pazuva kusaina. Ini ndaingofanirwa kubvuma kune mazwi ekushandisa kamwechete uye yangu diki inofara MacBook Pro yakazivikanwa nguva nenguva kuburikidza nechivako.
Zvakanakisa pane zvese, moyo wangu wechiratidzo wemaki wakadziyirwa ne kuenderera kwekutorwa kwechiratidzo kwandakaona panguva yega yega. Wese mushandi mumwechete watinosangana naye aive anofamba achitaura mumiriri wechiratidzo. Mumwe nemumwe akapa chidimbu chenhoroondo uye ainyanya kufara kutiratidza padhuze uye nerunako kuita mamwe mazano kuitira kuti tirege kupotsa zvinhu zvinoita sezvisingaperi zvezvinhu zvekuita.
Ini ndinogona kuenderera nekuenderera mberi nezve zvakawanda zvakawanda zvakasungirirwa pamwechete ichi chakaitwa zvakanaka brand. Pfungwa yangu ndeyekuti ivo vari kuita rakanakisa basa necheni yavo, kutarisa mune yega yega inooneka uye isingabatike nook uye cranny kusimbisa zvavari uye nezvavanomirira. Ivo havana kungozviita pamberi pekutengesa kana panzvimbo-yekutengesa. Ivo vakatipa mukana neiyo mhando mushure mekutengesa… vachizvisarudzira kushambadzira kwehutachiona, kudzoka kutenga uye hukuru hwehupenyu hwevatengi. Zvinotaridza kuti pane chidzidzo mukati medu tese
Ini ndakasiya ndakasununguka, ndichiita zvemashiripiti uye ndakagadzirira kudzoka panguva yekutanga mukana. Yakanaka yekumaka, West Baden Springs Hotera uye French Lick Springs Resort. Bravo!
Tags: brandinghoterawest baden
Nov 28, 2009 pa7: 01AM
Kutenda nekugovana izvi. Makore mashoma apfuura, ini ndakashandira Cook Medical kunze kweBloomington. Iyo kambani yakabata (uye vanofungidzira kuti vachiri kuita) yavo yegore mabiko emakambani kuWest Baden. Icho chivakwa chinoshamisa. Paunoshanyira, iva nechokwadi chekutorawo munzvimbo uye mapindu. Chokwadi zvakakodzera rwendo.